ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပုံတော်များ... - Myanmar Spirit
Home / About Buddha / ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပုံတော်များ...
8:11:00 pm Myanmar Spirit
ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပုံတော်များကို အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပုံတော်များကို ဓမ္မဒါန အဖြစ် တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ ပူဇော် နိုင်ကြပါတယ်။ မိမိ ရိုက်ကူးထားတာတွေ ဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်လုပ်တာပါ။ မိတ်ဆွေ တို့အနေနဲ့ ဘုရားဂုဏ်တော်များကို ကိုယ်စားရည်စူးပြီး ပူဇော် နိုင်ကြပါစေလို့ ။
(ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ဘုရား) ဟုထင်ရှားသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့ဘက်ထောင့်၊ အထက်ပစ္စယံ တွင် တည်ရှိသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် မုခ်(၄)မုခ် တန်ဆောင်းအတွင်းရှိ စဉ့်ကူးမင်း တည်ထားခဲ့သော ရုပ်ပွားတော်မြတ်များ (အနောက်ဘက်မုခ် ရုပ်ပွားတော်မှ မီးခ ခဲ့၍ အသစ်တည်ထားခဲ့သည်။)
မဟာ အံ့ထူးကံသာ ရုပ်ပွားတော်မြတ်
အာနန္ဒာဘုရားအတွင်းက ရပ်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်(၄)ဆူ
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက် ကျွန်းသား နဲ့ ထုလုပ်ပူဇော်ထားပါတယ်
ကျိုက်ပေါလော မှဲ့ရှင်တော် ဘုရား
ခြောက်ထပ်ကြီး လျောင်းတော်မူ ရုပ်ပွားတော်
Shwe Sandaw night scene. — at Bagan.
<<< သမိုင်းဝင် မော်တင်စွန်းစေတီတော်မြတ် >>>
ကျနော်ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဘူးတာဖြစ်ပြီး အမှတ်တရ ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ ဖူးခွင့်ရလို့ ကံကောင်းလှပါတယ်။
မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် ဘုရား။ ဓညဝတီမြို့ဟောင်း
၂၀၀၀ခုနှစ်တုန်းက မြောက်ဦးက တံငါသည်တဦးက ပိုက်ကွန်ထဲမှာ ငြိနေလို့ ဆယ်ယူရရှိတဲ့ ပေါ်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကို စစ်တွေကိုပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားတာပါ။ အရင်က ပုံတော်အနေနဲ့ဘဲ ဖူးဘူးပါတယ်။ အခုအပြင်မှာဖူးရတော့ အလွန်ကြည်ညိုဘွယ်ရာ ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။
လူမျိုးခြားတွေ ကြေးကို အ၇ည်ကြိုပြီး လက်နက်လုပ်ဘို့ ဆင်းတုတော်တွေ ယူတုန်းက ပါမသွားအောင် အပေါ်ကနေအင်္ဂတေ မံထားခဲ့တာ နောက် မှ ကျောက်မျက်လုံးတော်ပြုတ်ကျရာ ကနေ အထဲ မှာ ကြေးဆင်းတုတော် ရှိကြောင်း သိရပြီး ပြန်တွေ့တာပါ။ အရင်က ပျောက်နေခဲ့တာပါ။
သီဟိုက ပင့်လာတဲ့ အံတော်
အားလုံး ဖူးမျှော်နိုင်စေရန် ကူးယူ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit to Pe Myint Oo